कांग्रेस महाधिवेशन- पदाधिकारीमा दाबी गरेका युवा नेताले कसलाई रोज्दैछन् सभापति ?
कांग्रेसको आसन्न १४ औं महाधिवेशनमा युवा पुस्ताको मत कता जान्छ भन्ने कुराले नेतृत्वको निर्धारण गर्ने देखिएको छ । आगामी मंसिर ९ देखि १३ सम्म काठमाडौं हुने महाधिवेशनमा पदाधिकारी तहमा युवा पुस्ता हावी हुने देखिएको हो । अहिले पदाधिकारी तहमा उम्मेदवारी घोषणा गर्ने धेरैजसो युवा पुस्ता नै छन् ।
विश्वप्रकाश शर्मा र गगन थापाले महामन्त्रीमा उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेका छन् । त्यसै गरी, प्रदीप पौडेल, धनराज गुरूङ, चन्द्र भण्डारी, गुरूराज घिमिरेले पनि महामन्त्रीमा उम्मेदवारी दिने बताउँदै आएका छन् । त्यसबाहेक प्रकाशशरण महत, मीनेन्द्र रिजाललगायतका नेताहरूले पनि महामन्त्री पदमा आँखा लगाइरहेका छन् ।
कांग्रेस महाधिवेशनमा उम्मेदवारीको लहर र चर्चा हेर्दा पार्टीको मूल नेतृत्वबाहेकको पदाधिकारीमा युवा पुस्ता हावी हुने देखिन्छ । त्यो पनि कांग्रेसको भातृ संगठन नेपाल विद्यार्थी संघ र तरूण दलको नेतृत्व गरेका व्यक्तिहरू नै पदाधिकारी तहमा उम्मेदवारी दाबी गरिरहेका छन् ।
महामन्त्रीमा उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेका विश्वप्रकाश शर्मा नेपाल विद्यार्थी संघको अध्यक्ष र गगन थापा महामन्त्री भएका व्यक्ति हुन् । त्यसै गरी पदाधिकारीमा दाबी गरिरहेका प्रदीप पौडेल, धनराज गुरूङ, चन्द्र भण्डारी, गुरूराज घिमिरे पनि नेवि संघको नेतृत्वमा पुगिसकेका व्यक्ति हुन् ।
नेवि संघको अध्यक्ष भएका कल्याण गुरूङले त पार्टी सभापति पदमै उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेका छन् ।
यो पनि पढ्नुहोस् : कांग्रेसमा महाधिवेशनको सरगर्मी : तानातानमा युवा नेता
कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य डा. चन्द्र भण्डारी १४ औं महाधिवेशनले कांग्रेसलाई नेताबाट मुक्ति मिल्ने दाबी गर्छन् । आसन्न महाधिवेशनबाटै कांग्रेसको नेतृत्व युवा पुस्तामा आउन शुरू हुने उनको तर्क छ ।
‘कांग्रेसलाई नेताहरूबाट पनि निकास चाहिएको छ । युवा पुस्ताले कांग्रेसको नेतृत्व नगरेसम्म देशले विकासको गति समात्न सक्दैन,’ भण्डारीले भने, ‘हामीले वर्तमान राजनीतिको निकास मात्रै खोजेका छैनौं, वर्तमान राजनीतिको सोच, दृष्टिकोणबाट पनि पार्टीलाई निकास दिन चाहेका छौं । सोच, नेतृत्व र समाज परिवर्तनको तीनवटा कुरा लिएर हामी अगाडि बढेका छौं । त्यसैअनुसारको उम्मेदवारलाई अघि बढाउँछौं,’ भण्डारीले भने ।
भण्डारीका अनुसार आगामी महाधिवेशनमा कांग्रेसको केन्द्रीय पदाधिकारीमा युवा टीम उम्मेदवार बनेर आउँछ । त्यसमा अहिले उम्मेदवारी घोषणा गरिसकेका नेताहरू पनि समेटिने उनले बताए ।
कांग्रेसका अर्का युवा नेता गुरूराज घिमिरे कांग्रेसका आमकार्यकर्ताले पुस्तान्तरणसहित नेतृत्व हस्तान्तरण चाहेको बताउँछन् । तल्लो तहको अधिवेशनमा करीब ७० प्रतिशत ठाउँमा ४० देखि ६० वर्ष उमेर समूहका व्यक्ति नै नेतृत्वमा आएको उनको भनाइ छ । त्यसमध्ये एक तिहाइ जति ४० वर्ष मुनिकै व्यक्तिहरू नेतृत्वमा आएको उनको दाबी छ । उनीहरूले पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्वमा पनि युवा नै चाहेको घिमिरेले बताए ।
‘पार्टीको नेतृत्व मात्रै युवा होइन, पार्टीको नीतिमा पनि युवाकरण गर्न आवश्यक छ । त्यसका लागि युवा पुस्ता नै नेतृत्वमा स्थापित हुनुपर्छ,’ घिमिरेले भने, ‘अहिले नेतृत्वमा पहिलो पुस्ताकै नेता आए पनि आगामी महाधिवेशनमा युवा नै मूल नेतृत्वमा पुग्ने आधार तय भएको छ । पार्टीभित्रको व्यवहारिक पक्षको कारण पनि अहिलेको महाधिवेशनमा पहिलो पुस्ताकै नेताहरू मध्येबाट पार्टीको मूल नेतृत्व बन्ने सम्भावना छ ।’
कांग्रेसका अर्का नेता धनराज गुरूङ पनि आसन्न महाधिवेशनले युवा पुस्तालाई नेतृत्वमा स्थापित गराउने बताउँछन् । ‘१४ औं महाधिवेशन परम्परागत गुट भत्काएर नेतृत्व चयन गर्ने तागत लिएर आएको छ । कतिपयको उम्मेदवारी घोषणा भएको छ कतिपयको घोषणा हुनै बाँकी छ । घोषणा गर्न बाँकी रहेका मान्छे नेतृत्वमै पुग्ने गरी आउन पनि सक्छ,’ गुरूङले भने ।
युवा नेता कसको पक्षमा ?
कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशनमा नेतृत्वका आकांक्षीहरू सभापतिदेखि सबै पदाधिकारीमा प्यानल बनाएरै चुनावी मैदानमा आउँदैछन् । अहिले व्यक्तिगत रूपमा उम्मेदवारी घोषणा गरेकाहरू पनि कसको नेतृत्वको प्यानलमा सेट हुने भन्ने छलफलमा छन् ।
महामन्त्रीमा उम्मेदवारी घोषणा गरेको पार्टी प्रवक्ता समेत रहेका विश्वप्रकाश शर्मा पाएसम्म वर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवाकै प्यानलमा सेट हुने प्रयासमा छन् । देउवाको प्यानलमा डा. प्रकाशशरण महत, बालकृष्ण खाण, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलगायतले महामन्त्री दाबी गरिरहेका छन् ।
वर्तमान महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले पनि कुन पदमा उम्मेदवार बन्ने भन्ने सार्वजनिक घोषणा गरिसकेका छैनन् । यस्तो अवस्थामा शर्माले देउवाको प्यानलमा महामन्त्रीको स्थान नपाउने सम्भावना प्रवल छ ।
देउवाको प्यानलमा महामन्त्रीको टिकट नपाउँदा शर्मा विमलेन्द्र निधि नेतृत्वमा प्यानलमा सहभागी हुने तयारीमा सोचमा रहेको उनी निकट नेताहरू बताउँछन् । देउवा प्यानलमा रहेका निधिले देउवाले सभापतिमा दोहोरिने रुचि गरेपछि विद्रोह गरेर सभापतिमा उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेर प्रचार अभियानमा जुटेका छन् ।
अघिल्लो महाधिवेशनमा कृष्ण सिटौलाको टीमबाट महामन्त्रीको उम्मेदवार बनेका गगन थापा विजयी हुन सकेनन् । उनीसँग उनका आफ्नै ससुरा अर्जुन नरसिंह केसी र बीपीपुत्र शशांक कोइरालाले प्रतिस्पर्धा गरेका थिए । १३ औं महाधिवेशनमा शशांक महामन्त्रीमा विजयी भएका थिए ।
तर, यसपटक थापाले पुरानो गुट छाड्ने संकेत गरेका छन् । भदौ १७ मा कांग्रेसको संस्थापन इतर समूहले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उपस्थित भएर उनले आफू संस्थापन इतर समूहबाट महामन्त्रीको उम्मेदवार बन्ने संकेत गरेका थिए । उक्त पत्रकार सम्मेलनमा कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले संस्थापन इतर समूहबाट सभापतिमा साझा उम्मेदवार ल्याउने प्रतिबद्धता गरेका थिए । तर, अझै पनि उनीहरूले साझा उम्मेदवार तय गर्न सकेका छैनन् ।
पौडेल स्वयं सभापति पदका आकांक्षी छन् । त्यसबाहेक महामन्त्री शशांक कोइराला, नेताहरू प्रकाशमान सिंह र शेखर कोइरालाले सभापतिमा दाबी गरेका छन् । तर, साझा उम्मेदवार बनाउँदा शशांक र प्रकाशमानमध्ये एक जना सभापतिको उम्मेदवारमा आउने पदाधिकारीको उम्मेदवारीमा दाबी गरिरहेका एक युवा नेताले बताए ।
संस्थापन इतर समूहबाटै चन्द्र भण्डारी, गुरूराज घिमिरेलगायतका युवा नेताले महामन्त्री पदमा उम्मेदवारी दाबी गरिरहेका छन् । उनीहरू आफ्नो समूहमा छलफल पछि मात्रै सार्वजनिक रूपमा उम्मेदवारी घोषणा गर्ने योजनामा छन् ।
‘मेरो दाबी महामन्त्रीको उम्मेदवारीमै हो । तर, सभापतिको उम्मेदवार अहिलेसम्म तय भएको छैन । समूहमा छलफलपछि मात्रै उम्मेदवारी के गर्ने भन्ने टुंगो लाग्छ । केन्द्रीय सदस्यको उम्मेदवार चाहिँ बन्दिनँ,’ नेता गुरूराज घिमिरेले भने ।
महामन्त्री पदमा उम्मेदवार बन्ने तयारी थालेका अर्का युवा नेता प्रदीप पौडेल भने यस पटक कृष्ण सिटौलाको प्यानलमा सहभागी हुने चर्चा कांग्रेस वृत्तमा छ । ‘सिटौलाले आफ्नो गुट कमजोर नरहेको सन्देश दिने गरी महाधिवेशन उम्मेदवारको सेट बनाउन लागेका छन् । त्यसमा पौडेललाई महामन्त्रीको उम्मेदवार बनाउने उनको तयारी छ,’ कांग्रेसका एक नेताले भने ।
*गगन थापा नेपाल विद्यार्थी संघको महामन्त्री भइसकेको हुनुपर्नेमा अन्यथा भएकोले सच्याइएको छ ।